Adihevitra mikasika ny Modely Sinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2010 13:25 GMT
Nitsidika an'i Sina ny praiministra Britanika David Cameron tamin'ny volana lasa teo. Taorian’ ny lahateniny tao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking, dia nisy mpianatra iray nanontany azy momba ny azony notsoahina mikasika an'i Sina. Toy izao ny fanontaniana , “Raha tonga taty Sina ireo mpitarika Tandrefana, dia nirona foana tamin'ny fampianarana an'i Sina mikasika ny demokrasia, ny zon'olombelona, sy ny zavatra maro hafa izy ireo. Ny tiako anontaniana dia izao: inona no azonao notsoahina tamin'ny rafitra Sinoa ?” Namaly i Cameron no sady nandray ohatra mikasika ny fahombiazan'ny fitantanana nandritra ny lalao Olympika tany Beijing.
Niteraka resaka mafana tamin'ny aterineto sy ny haino aman-jery nentim-paharazana ny tantara. Nanakiana ny mpianatry ny Anjerimanontolo ao Peking ny olona sasany noho izy ireo “miditra loatra ara-politika” eo amin'ny fanontaniany. Ny sasany kosa miresaka mikasika ny hoe inona marina no tena dikan'ny hoe “Modely Sinoa”? Na izany aza, taty aoriana kely, nazavaina fa mpianatra vahiny ilay mpianatra nametraka ilay fanontaniana ary tsy nampiasa ny teny hoe “Sina modely ” izy, na izany aza, ilaina ny mijery ny adihevitra.
Mitovy amin'ny fandikana amin'ny fomba ofisialy ny Sina Modely [cn], naka avy amin'ny fiavian'ny teny avy amin'ny olom-panjakana teo aloha Deng Xiaoping i Han Zhengfeng, mpampianatra mikasika ny Marksisma. Na izany aza, manamafy i Han fa ny tetikasa ara-politikan'i Deng tamin'ny famelabelarana ny “Sosialisma miaraka amin'ireo toetra sinoa ihavahana” dia fanandramana iray hanavahana an'i Sina amin'ireo modely kaomionista Sovietika ary tsy mety aondrana any amin'ny firenena hafa ny Modely Sinoa:
Tamin'ny volana May 1980, raha niresaka mikasika ny fifandraisana amin'ny antoko hafa izy (Deng), dia nasehony fa ” tsy nanaraka ny Revolision'ny volana Oktobra tany Rosia ny revolisiona Sinoa”. “Ny fanambarana ny foto-kevitra iraisam-pirenena Marksista sy ny tena fampiharana any Sina no nahatonga ny fahombiazan'ny revolisiona Sinoa . Tsy tokony hangataka isika hoe ireo firenena an-dalam-pandrosoana hafa dia hahita revolisiona daholo raha maka tahaka an'i Modely Sinoa ary tsy tokony hangataka ihany koa isika hoe ireo firenena manam-bola mandroso dia handray ny fomban'i Sina modely.”
Ara-politika, ny mpandinika liberaly, Qin Hui, na izany aza dia manondro mazava fa raha misy ny “Modely Sinoa”, dia tsy ho voafaritry ny làlan-tsaina (“ism”) ara-ekonomika mihitsy izany fa voafaritry ny rafitra na ny seha-pifaneraserana ara-politika :
Tsy natao ho amin'ny “làlan-tsaina” (“ism”) ny toetoetra Sinoa , mikasika ny rafitra sy seha-pifaneraserana ara-politika izy ity, ho an'ny sehatra ara-politika : any Andrefana, ao anaty rafitra demokratika no manohitra ny Havia sy ny Havanana raha toa kosa aty Sina, ka tena samy manana ny rafiny na ny seha-pifaneraserany ny Havia sy ny Havanana. Noho izany, na ny Havia na ny Havanana dia samy mihevitra ho an'ny “amperora” fa tsy ho an'ny vahoaka — tsy miezaka ny hiampanga olona aho amin'izany. Mitovy amin'ny an'ny Andrefana ihany ny fahatsapan-tena ara-moralin'ny Havia sy ny Havanana aty Sina, fa ny mekanisma hiainana izany no tsy mitovy. Izay no mahatonga ny Havia sy ny Havanana ho samy manana ny anjara asa tanterahany raha oharina amin'ny an'ny tandrefana . Manosika ny governemanta hitaky hetra amin'ny vahoaka ny Haviantsika, raha tsy izany dia voatery handeha amin'ny lalan-dratsin'ny “liberalisma vaovao” (“neo-liberalism”) i Sina; raha toa kosa ka mandràra ny governemanta amin'ny famoaham-bola ho an'ny vahoaka ny Havanantsika raha tsy izany i Sina dia ho latsaka amin'ny làlana feno fandrika mahatsiravin'ny ” fanjakana mpiahy” ….
Toy izao no “modely” amintsika! Raha ny tena marina, sady tsy Havia isika izao no tsy Havanana amin'ireo firenena hafa. Na izany aza, raha miodina amin'ny Havia isika, dia ho mora foana ho an'ny governemanta ny hanampatra ny fahefany nefa ho sarotra ny hitàna azy ireo ho tomponandraikitra. Ahoana ary raha mihodina Havanana e? Mora foana ho an'ny governemanta amin'izay ny mitsipaka ny andraikiny, nefa isika tsy afaka mametra ny fahefany. Mazava ho azy fa manana ny lafintsarany izany làlana izany, hahazo fitomboana haingana isika izay tena azo raisina ho mahomby hisahanana ny loza tsy ampoizina. Miaraka amin'ireto vola be eto an-tànana ireto, tena mora ny manetsika ny toekarentsika sy mamaha ny olana rehetra. Na izany aza, inona no mety ho vokany? Milaza ny sasany fa ny famatsiam-bola diso tafahoatra dia hiteraka famokarana betsaka loatra, hiafara amin'ny fisaraham-bazana eo amin'ny mpanana sy ny mahantra ny tombony be azo avy amin'ireo sehatra manjaka tokana ary hiafara amin'ny fitotongan'ny tsena anatiny ny fanafoanana ny fanjifàna. Hiteraka loza hafa ihany koa ny fanangonam-pahefana. Tsy hiditra amin'ny antsipiriany aho mikasika ireo voka-dratsy voalaza etsy ambony ireo. Ny zavatra tena tiako tsindriana eto dia hoe raha tena misy marina izany modely izany, ary raha voafaritra amin'ny mahasamihafa azy amin'ny Tandrefana ny Modely Sinoa, inona no mety hoavin'i Sina sy izao tontolo izao eo amin'ny sehatra fifanakalozana ara-bola mirona mankamin'ny fanatontoloana ankehitriny?
Miezaka manohana ny heviny i Zheng Yongnian, manampahaizana momba an'i Sina mipetraka any Singaporo, fa tsy manohitra ny demokrasia ny “Modely Sinoa ” fa manana ny toetra maha-Sinoa azy ny demokrasiany:
Ao anaty fotoana marefo i Sina raha resaka mikasika ny fandrosoana ara-politika. Mbola manameloka ny toerana misy ny zon'olombelona sy ny fampandrosoana ny demokrasia any Sina ny Tandrefana. Tena manana olana maro i Sina, nefa mifandray amin'ny fandresen-dahatry ny foto-kevitra tandrefana ihany koa ny vahaolana .
Firenena an-dalam-pandrosoana maro no maneho fomba fijery samihafa. Tsy nanome ny vahoakany ireo zo ara-politikany akory zo maha-olombelona sy ny demokrasian'ny Tandrefana. Tsy nanome azy ireo ny filaminana ara-politika sy fandrosoana ara-toekarena akory ilay antsoina hoe rafitra ara-politika fa niteraka kolikoly ara-politika sy korontana ara-tsosialy .
Fanampin'izany, tsy mandà ny zon'olombelona sy ny demokrasia i Sina modely. Manamafy ny fandalovana amin'ny fampandrosoan'ny zon'ny vahoaka izany. Tokony manana fototra ara-toe-karena foana ny fiarahamonina iray alohan'ny hananan'ny olona ny zony ara-politika. Miankina amin'ny foto-drafitr'asa ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny rafitra ara-politikantsika. Nitondra zo ara-politika kokoa ho an'ny vahoaka Sinoa ny fiovàna ara-toe-karena noho ny an'ireo firenena izay nisafidy na noterena hanaraka ny modely demokratika tandrefana . Izay no mahatonga an'i Sina modely ho manintona kokoa ho an'ireo tany an-dalam-pandrosoana maro.
Tsy mino i Tang Zhileng hoe efa nisy “ny Modely Sinoa” satria mbola eo an-dàlam-piovàna ara-politika sy ara-ekonomika i Sina :
Hatramin'izao, mbola “toerana fanaovana andrana” ho an'ireo foto-kevitra avy any ivelany foana aloha ny fiarahamonintsika, miaraka amin'ireo fandrosoany haingana ara-toekarena. Tsy manana foto-kevitra mitombina tsara isika hanazavantsika ny tena marina mikasika ny fandrosoantsika ara-toekarena nandritra ny 30 taona. Namorona zavatra hafa ny mpandinika sasany, toy ny varavarana misokatra ho an'ny politika, fifanarahana iraisam-pirenena, tsena ara-teokarena, ary firotsahana mivantan'ny governemanta mba hanazava ny fandrosoana ara-toekarentsika. Na izany aza, fehin'ny niainantsika fotsiny ireo, fa tsy foto-kevitra efa mipetraka .
Raha tena misy ny “Modely Sinoa”, dia tokony hanosika ny soatoavina ara-moraly fototra toy ny fanajana ny aina, ny fahatsampan-tena, ny fandraisan'andraikitra, ny fitokisana, ny rariny, ny marina izany modely izany. Na dia manome lanja ny soatoavina toy ny hoe fampandrosoana ara-tsiansa, fandrosoana mirindra sy mitodika amin'ny maha-olona, ary ny tontolo iainana sahaza aza ny governemanta foibe, dia tena ny mifanohitra tanteraka amin'ireo soatoavina voalaza etsy ambony ireo ny zavatra iainantsika ara-toekarena sy sosialy. Ho an'ny governemanta sy ny vondron'orinasa eo an-toerana, ireto no hitantsika: alikaola, menaka fahandro sy vovo-dronono misy poizina; loza any amin'ny toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy ara-indostria; loto manimba ny tontolo iainana; herisetra; olana tsenan'ny fananan-tany; hantsana goavana eo amin'ny mpanana sy ny sahirana, ny fibahanan'ny finoanoam-poana eo amin'ny fiarahamonina… Mbola mamerina manangana ny soatoavintsika foana isika amin'izao fotoana izao izay raha tsy misy azy dia tsy ho tratra ny “Modely Sinoa”. Raha misisika isika milaza fa efa voavaotrantsika ny “Modely Sinoa” inona ary no tena fiantraikan'izany modely izany amin'ny sarambabem-bahoaka ? Modely natao fotsiny ho an'ny ambaratongan'ny manampahaizana izany.